Dagaalo Culus Oo Iminka Ka Soconeyaa Magaalada Mogdisho.
Dagaalo culus ayaa saaka ka bilowday qeybo ka mid ah Waqooyiga Muqdisho, iyadoo la maqlayo hubka culus oo ay ka mid yihiin Taangiyada iyo madaafiicda goobta oo ay isu adeegsanayaan dhinacyada isku hor fadhiya aagaga la isku haayo.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu bilowday kadib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay qaadeen weerarka, waxaana la arkayay Taangiyo ay leeyihiin Ciidamada AMISOM oo dagaalka ka qeyb qaadanaya.
Sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa ka soconaya Xaafado ka tirsan Boondheere iyo Shibis, halkaasoo la sheegayo in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM weeraro ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin Xoogaga Alshabaab.
Ilaa iyo hada waxaa la soo sheegayaa dhimashada haweeney da' aheyd, kadib markii la sheegay in Hoy ay degmada Boondheere kaga sugneyd uu Madfac ku dhacay, waxaana dhaawacyo soo gaaray dad kale oo ehelo la ahaa.
Gudoomiyaha degmada Boondheere C/llaahi Istakiin ayaa sheegay in dagaalka uu wali socdo, isla markaana Ciidamada Dowladda la wareegeen fariisimo dhowr ah sida uu sheegtay.
C/llaahi Istakiin ayaa sidoo kale sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku siqeen dhanka Xaruntii Nabad Sugida ee Gurigii Habar Khadiijo iyo qeybo ka mid ah Xaafadaha Boondheere iyo Shibis ka tirsan.
Sidoo kale dagaalka oo wali soconaya ayaan wali la ogeyn qasaaraha kala gaaray dhinacyada dagaalamaya, iyadoo saameynta dagaalada laga dareemayo xaafadaha qaar, oo laga maqlayo hubka cul culus iyo madaafiicda.
FG: hadaba si aad ugu qeyb qaadatid dhismaha masjidka weyn ee Baydhabo waxaad ugu hagaajin kartaa wixii qarashaad ah
Wixii warar ee ku soo kordha kala soco baidoanews.com Isha koowaad ee wararka dhabta ah Ka soo dhiibo wixii fikirkaaga ama macluumaad aad heyso.
Akhriso:-Xaalada degmada Walanweyn kadib dagaalo ka dhacay